Waa Maxay Cilmiga Falsafada Siyaasada? - Diblomaasi
Waa Maxay Cilmiga Falsafada Siyaasada “Political philosophy”
Falsafadda siyaasada, oo sidoo kale loo yaqaan aragtida siyaasadeed, waa cilmiga barashada mowduucyada ay ka mid yihiin siyaasadda, xorriyadda, caddaaladda, hantida, xuquuqda, sharciga, iyo hirgelinta shuruucda awoodda.
Falsafada siyaasada waa laan falsafadeed, sidoo kale waxay qayb weyn ka qaadataa cilmiga siyaasada, taasoo xooga saaraysa taariikhda fikirka siyaasadeed iyo aragtida siyaasadeed ee casriga ah. Falsafadda siyaasadeed waa daraasadda su’aalaha aasaasiga ah ee ku saabsan dowladnimada, dowladda, siyaasadda, xorriyadda, caddaaladda iyo hirgelinta sareynta sharciga.
Cilmiga falsafada waxay jawaabo badan ka bixisaa su’aalo u baahan in aadanaha ay ka jawaabaan sida “Waa maxay dowlad?” “Maxaa dowladaha loogu baahan yahay?” “Maxaa dowlad ka dhiga sharci?” “Waa maxay xuquuqaha iyo xorriyadda ay tahay in dowlad ay difaacdo?” “Waa maxay waajibaadka muwaaddiniinta ku leeyihiin dawlad sharci ah? iyo “Goormaa ayaa dawlad sharci ahaan loo afgambi karaa?”
Falsafada siyaasadeed waxaa lagu qeexi karaa fikir falsafadeed oo ku saabsan sida ugu wanaagsan ee loo diyaarin karo nolosheenna wadajirka ah – hay’adaheena siyaasadeed iyo dhaqamadeena bulsheed, sida nidaamkeena dhaqaalaha iyo qaabka nolosha qoyska.
Falsafada siyaasadeed ayaa lagu dhaqmayay ilaa iyo inta bini aadamku u arkayay abaabulkooda wadareed inaysan u muuqan karin mid qayb ka ah nidaamka dabiiciga ah laakiin ay macquul tahay inay u furan yihiin isbadal, sidaa darteedna ay ugu baahan yihiin saadaalin falsafadeed.
Masuuliyiinta dowladda iyo aqoonyahaanada siyaasiinta ah waxaa wanaagsan in marwalbo ay ka shaqeeyaan dhisida caddaalad lagu wada kalsoonaan karo, dastuur hoos yimaada caddaalada iyo simnaanta, iyo difaacida xaquuqda nolosha bulshada noocyadeeda kala duwan, xoriyada, hantida dadweynaha, sidoo kale fursad-siinta hal-abuurayaasha ganacsiga iyo horumarka. Sidaas awgeed bulsho walbo oo caalamka kamid ah waxay u baahan yihiin rag matala oo ka shaqeeya danaha jiritaankooda.
Majaladda Somalism ayaa daabacday majalad cinwaankeedu yahay ‘Yaa Mudan Hoggaaminta JF Soomaaliya?
Qian wuxuu ku dhashay Shiinaha sannadkii 1911-kii, waaliddintiisa waxay ahaayeen dad wax bartay, kaddib markii uu ka shaqeeyay Japan, wuxuu bilaabay hanaankii waxbarashada Shiinaha. Qian wuxuu ahaa ardey firfircoon, wuxuu ka qalin jebiyay jaamacadda ku taalla Shanghai ee Jiao Tong, wuxuuna ku guuleystay deeq waxbarsho oo naadir ah si uu ugu biiro jaamacadda teknoloojiyadda ee Massachusetts ee ku taalla Mareykanka.
Qian waxaa la guddoonsiiyay shati uu kaga shaqeyn karo cilmi baarista dhanka hubka, xita wuxuu ka mid noqday guddiga dowladda Mareykanka kala taliyo seyniska. Ka dib markii uu dhamaaday dagaalkii labaad ee adduunka, wuxuu ka mid ahaa khuburradii loo diray Jarmalka, waxaana la socday seynisyahan lagu magacaabo Theodore von Karman. Wuxuu hadafkoodu ahaa inay soo wareystaan injineerada Nazi-ga oo uu ka mid ahaa Wernher von Braun oo ah ninkii hoggaaminayay gantaallada Jarmalka. XIlligaas Mareykanka wuxuu doonayay in uu ogaado cilmiga Jarmalka.
Guddoomiyihii hoggaaminayay kacdoonkii shuuciga ee Shiinaha, Mao Tse-Tung, ayaa sannadkii 1949-kii ku dhawaaqay in Mareykanka uu yahay “Sheydaan”, sida uu sheegay Chris Jespersen. Agaasimihii cusbaa ee sheybaarka waaxda cirbixiyeennada Mareykanka ayaa rumeysanaa in qof basaas ah uu ku sugan yahay sheybaarka, wuxuuna arrintaas la wadagaay saraakiil ka tirsanayd FBI-da. “Waxaan u maleynayaa in ay ka soo jeedaan Shiinaha ama Yuhuudda,” ayuu yiri Fraser Macdonald.
Daraasad cusub ayaa muujineysaa in Qian iyo Frank Malina ay isku xilli ku biireen xisbigaas, sannadkii 1938. Zuoyue Wang oo ah barofesoor Cilmiga Taariikda ka dhiga jaamacadda California ayaa sheegayaa in aanay jirin caddeymo ku saabsan in Qian uu howlo basaasnimo waday markii uu ku sugnaa Mareykanka.
Qian Xuesen iyo qarenkiisa bishii Nofembar sanadkii 1950-kii xiliggaas oo ay socotay dhageysiga dacwadda ku saabsaneyd in lasoo tarxiilo Qian
Tobonnaan sano ka dib wuxuu tababaray seynisyahanno badan, shaqadiisana waxay suurogelisay in dadka u dhashay Shinaha ay raacaan dayax gacmeedka. Gantaalladii sameyntooda uu Qian ka caawiyay Shiinaha waxay suurogeliyeen in lagu weeraro Mareykanka.
Taallo muujineysa gantaall oo la dhigay matxafka Qian Xuesen ee ku yaalla Shanghai
Halkaan ka daawo taariikhda calanka Soomaaliyeed
Maanta oo kale, Sanadka walba waxaa dalka laga xusaa Maalinta Calanka, waa maalin ka tarjumeysa Qarannimo, Midnimo iyo gumeysi naceyb, 66 sano ayaa ka soo wareegatay markii la sameeyay calanka Soomaaliyeed, calankeeda waxaa uu leeyahay Sooyaal qiimo badan oo dal iyo dibadba lagu faani karo.
Sida uu ii sheegay halgamaaga Soomaaliyeed Cali Xasan Maslax Berdura oo ka tirsanaa 13-kii ee aasaastay SYL, habeenkii la dhisayey SYl waxaa lagu heshiiyay dastuur cusub iyo qodobo badan oo aan laga gudbi karin iyo calanka. Calankii habeenkaas, waxaa laga dhigay calan leh bil oo tilmaamaysa Islaamka, xidigta oo ah Soomlinimada iyo shanta farood oo midnimo iyo wada jir ah.
Laakiin Markii Talyaaniga uu la wareegay maamulka Soomaaliya 1950-kii, gumeytaha Ingiriiska waxaa uu ku dhaqaaqay talaabooyin waalli ah, Ingiriis-ka waxaa uu qaatay waqooyiga Soomaaliya, NFD waxaa uu siiiyay gumeystaha Kenya, Xeebta ama Djabuti waxaa xoogay Faransiiska, Ingiriiska sidoo kale Itoobiya waxaa uu siiyay Somali Galbeed, waxaa arin culus noqotay in dhulkaas iyo dadka degan la isku keeno.
Maxamad Cawaale Liibaan, Calanka waxaa uu ku sameeyay wax ka yar 24 saac, laakin waxaa uu noqday calan umadda Soomaaliyeed ka tarjuma, isagoo soo bandgigay. Xiddigta cad ee shanta gees leh waxaa ay ka tarjumeysaa Shanta qeybood ee dhulka Soomaalidu degto ka kooban yahay.
Midabka buluugga khafiifka ah waxaa uu ka tarjumayaa Cirka iyo badda dhulka Somaalida oo mar walba midabkoodu buluug yahay. Calankan Buluugga ah ee xidigta ka tarjumeysa Soomaliweyn dhexda uga hardhan tahay waxaa la sameeyay 12 October, 1954.
Xigashada qoraalada qaar: Goobjoog
Haddii xero aadan ka bixi karin laggugu xareeyo waxaad tahay addoon, maxaa yeelay uma tasarufi kartid si walba oo aad jeceshahay. Anigu hadda waan xaraysnahay, waxaan taaganahay meel bannaan, waxaan hadba eegayaa jihooyinka dhinacyada iga xiga, jihadii aan eegaba way xidhan tahay (owdan tahay), kor baan eegay waa cir, hoos baan eegay waa dhadhaab, meel aan u dhaafo maleh, waxaan isku arkaa qof xaraysan tabarna aan u lahayn inuu baxsado.
Xaal walba xaajuu leeyahay, xaalada aan ku jiro waxay i baraysaa labo arrin:
1- inaanan haysan xoriyad buuxda oo aan ku faani karo.
2- si xerada dhexdeeda nolosha aan ku haysto iigu haggaagto waa inaan baadi goobo ciddii i xaraysatay, markaan helo waa inaan raali ahaanteeda biiriyo si aan mar kale la ii sii xarayn oo xoriyada la iigu sii yarayn.
Addoonimada dhabta ah waa tan aan ku jirno haddii aynu bashar nahay, xoriyadda yaree aynu ka sheekayno waa mid aan macna wayn lahayn marka la eego xoriyadda wayn ee ina ka maqan oo ah inaynan nafteena maamulkeeda xitta u madax banaanayn dhinacyo badan.
Inta Islaamku uu doonayo inaad fahanto waa intaas, Allah ayaa xayndaabkan ku keensaday isaga ayaad addoon u tahay, sidaas darteed waa inaad u hugaansataa oo aadan uga dhex ciyaarin xayndaabkiisan uu ku keensaday, hadaba inaad Eebe u hugaansanaato waa halka jid ee maan-galka ah hadii aad is-rabtid.
Mar kale ayaa intaan fakaray ayaan is idhi haddii aad midowdaan saad insaan u tihiin oo aad kaashataan ilma adeertiin reer jin miyaydaan ka bixi karin xayndaabkan iyo xeradan addoomada idin ka dhigtay?
Saa waxaan rajadaasna ka quustay xoriyad inaan helaynna yaqiinsaday markaaan maqlay aayad dhawaaq dheer oo odhanaysa:
“يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ”.
Bariga dhexe12 hours ago